admin – bestnepalnews
विराटनगर, २५ मंसिर । मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा दाजुलाई लिन आएको स्कूल बसले ठ क्कर दिँदा भाईको ज्यान गएको छ । बेलवारी ५ मा एक वर्षीय बालकको ज्यान गएको हो । बेलबारीकी शिवकुमारी साह आफ्नो एक वर्षका छोरा सहित अर्का पाँच वर्षका छोरालाई विद्यालय पठाउन सडकमा पुगेकी थिइन् । एलकेजीमा अध्ययनरत पाँच वर्षका छोरा सोनुलाई विद्यालय पठाउनु थियो । उनी सोनुलाई बसमा चढाउन जाँदा एक वर्षका यसराजलाई पनि संगै लिएर गइन् । जब स्कूल बस आयो उनले एक वर्षका छोरालाई भुईमा राखेर सोनुलाई बसमा चढाउन लागिन् । सोनु चढ्ना साथ बस अगाडी गुड्यो । सोनुलाई बसमा चढाउँदा भुँईमा राखेको छोरा घस्रिँदै बस मुनी पुगेका थिए । विद्यार्थी चढेपछि हतार गर्दै हुँइकिएको बसले ठ क्कर दिँदा नाबालकको घ टना स्थलमै ज्यान गएको हो । बिहान सवा ९ बजेको समयमा विद्यार्थी लिन पुगेको को १ क ३०४६ नम्बरको कसेनी बोर्डिङ स्कुलको बसले यसराजलाई ठ क्कर दिएक
काठमाडौं। भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ। सन् १९११ मा जारी आलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूमागमा पर्ने स्पष्ट छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्। स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो।’ भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ। सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बु
काठमाडौं। चिठ्ठा तथा पार्सलको प्रलोभन देखाएर झण्डै १५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा तीन जना प’क्राउ परेका छन् । प’क्राउ पर्नेमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीसमेत छन् । भाइबर, ह्वाट्स एप, इमो, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी चिठ्ठा परेको, पार्सल आएको भन्दै प्रलोभन देखाउने र ठगी गर्ने गरेको आरोपमा दोलखाका रमेश खड्का, नवलपरासीका विश्वेश्वरप्रसाद तिवारी र सन्दीप कलवार प’क्राउ परेका हुन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाकाअनुसार प’क्राउ परेकामध्ये खड्का रेष्टुरेन्ट व्यवसायी हुन् । उनीहरुले नाइजेरियन नागरिक पिटर हेर्मन र बेलायती स्मिथ मोरिसको योजनामा काम गरेका थिए । पिटर र स्मिथले नेपालका ठगीका लागि मात्र ४० भन्दा बढी एजेन्ट परिचालन गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुले ठगी गरेको रक
काठमाडौं, २५ मंसिर । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड दुई सातासम्म दिउँसोमा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले मङ्सिर २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई साताका लागि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना कार्यालयको मागअनुसार निर्णय गरिएको भन्दै सो अवधिमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न चितवन प्रशासनले सबैमा आह्वान गरेको छ । सो अवधिमा नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने यात्रुवाहक सवारी साधन १५ किलो र मालवाहक सवारी साधन दासढुङ्गामा रोकिनेछन् । यस्तै मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आउने यात्रुवाहक सवारी साधन मुग्लिन र बेनिटार तथा मालवाहक सवारी साधन लेवाटार र आबुखैरहनीमा रोकिनेछ । एम्बुलेन्स, शवबाहनलगायत अत्याव
काठमाडौं । भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच सीमा विवाद चुलिँदै गएको छ । नोभेम्बर २ मा भारतले नेपालको अतिक्रमित लिपिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद बल्झिएको हो । भारतको सो कदमको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय छलफलपछि दुई साता अघि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो । सो नोटमा वार्ताको माध्यमबाट देखिएको सीमा विवाद अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म भारतले कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएको छैन । तर, नेपाल सरकार भने भारतले पठाउने जवाफ कुरेर बसेको छ । यद्यपी भारतले जवाफ नपठाएको विषयमा गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमासमेत छलफल भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञव
मिस मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै लण्डन पुगेकी अनुष्का श्रेष्ठ उत्कृष्ट ४० मा पुगेकी छिन् । हेड टु हेड च्यालेञ्ज जितेर उनी उत्कृष्ट ४० मा पुगेकी हुन् । १२४ दृेशका सुन्दरीहरुबीच डिसेम्बर १४ मा लण्डनमा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई चरणमा हुने हेड टु हेड प्रतियोगिताअन्तर्गत अनुष्काले पहिलो चरणमा इन्डोनेसियाकी सुन्दरी र दोस्रो चरणमा मेक्सिकोकी सुन्दरीलाई पछि पारेकी थिइन् । मल्टिमिडिया अवार्डमा अनुष्का उत्कृष्ट ३ मा छिन् । यो अवार्ड भोटिङका आधारमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । अनुष्काले व्युटी विथ प्रपोजमा पनि आफूलाई उत्कृष्ट १० मा पुर्‍याएकी छिन् । उनले मिस नेपालमा नेपालको नाम राख्ने र पर्यटन भित्र्याउन भूमिका खेल्ने बताएकी छिन् ।
मुस्ताङका खोलानाला जम्न थाले !
पर्वत : यो बर्ष हि’मपात सुरु नहुँदै हिमालपारीका जिल्ला मुस्ताङका खो’लानाला ज’म्न थालेका छन्। अ’त्याधिक चिसो ब’ढेका कारण ज’नजीवन क’ष्टकर बन्न थालेको र मानिसहरुलाई घर बाहिर नि’स्कनै क’ठिन भइरहेको छ। तल्लो मुस्ताङमा भन्दा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका दुई गाउँपालिकाहरू लो–घेकर, दामोदर कुण्ड र लोमान्थाङमा रहेका चराङ, लोमान्थाङ, छोसेर, छोन्हुप लगायतका ठाउँमा चिसो बढेको छ। चिसोका कारण खोलामा ब’गिरहेको पानी र धाराबाट ख’स्दै गरेको पानी नै ज’म्न थालेको हो। स्थानीय तिलक विश्वकर्माका अनुसार उपल्लो मुस्ताङमा रहेका खो’लानाला, धारा र सङ्कलन गरेर राखिएको पानीसमेत ज’मेको छ। ‘तल्लो मुस्ताङको तापक्रम माइनस ७ डिग्रीसम्म झ’रेको छ। माथिभन्दा त तल न्यानो हुने नै भयो।’ उनले भने, ‘खोला र धाराको पानी जम्नको लागि लगभग मा’इनस २०
नेपाल-भारत सीमा विवाद :नेपालले पठाएको पत्रको भारतले जवाफ नै दिएन !
काठमाडौं,नेपाल र भारतबीच सीमा वि’वाद स’माधानका लागि नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारत सरकारले अहिलेसम्म पनि नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै एक महिनाअघि चु’लिएको वि’वाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक त’हबाट पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई दुई साताअघि पत्र पठाएको थियो ।सो पत्रको विषयमा कुनै पनि जवाफ नआएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । ‘नेपालले भारतको जवाफीपत्र कु’रिरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आशा छ केही समयमा त्यसको ज’वाफ भारतले दिनेछ ।’ सीमा वि’वादको विषयमा भारतलाई पठाएको पत्रबारे कुनै जवाफ नआएको विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए ।सीमा विवादको वि
काठमाडौं– नेपाली चेली कन्चन अमात्य अमेरिकाको प्रतिष्ठित राइस अवार्डबाट सम्मानित भएकी छिन् । वाशिंगटन डिसी स्थित रोनाल्ड रेगन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा नेपाली चेली कन्चनलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा नेतृत्व एवं नवीन पद्धतिको भूमिका निर्वाहका लागि उनलाई सो अवार्डसहित सम्मान गरिएको जनाइएको छ । विश्वका हजार भन्दा बढी उच्चस्तरीय व्यावसायीहरुको भेलामा अमात्यलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । अवार्डका लागि ब्राजिल, कम्बोडिया, क्यानडा, एल साल्भाडोर, भारत, नाइजेरिया लगायत २२ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । उनी अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा संचालित क्लिन्टन फाउन्डेसनले प्रदान गर्दै आएको ‘प्रेसिडेनसिएल क्लिन्टन ग्लोबल इनिसीएटिव अनर रोल अवार्ड–२०१७’ द्वारा
विराटनगर- सडक दुर्घटनामा पेसाले डाक्टर बाबु र नर्स छोरीको निधन भएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा मोटरसाइकलमा सवार बाबु छोरीलाई यात्रुबहाक बसले ठक्कर दिएको हो। ठक्कर लगत्तै उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेजमा लगिएको थियो। उपचारका क्रममा नै उनीहरु दुवैजनाको निधन भएको नेमुवा ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज तुलामणी आचार्यले बताए। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा विराटनगरको गोल्छा आँखा अस्पतालमा कार्यरत ५२ वर्षिय शुभलाल माझी र उनकी २६ वर्षिया छोरी अञ्जलीकुमारी माझी रहेका छन्। अञ्जली विराटनगरको न्युरो अस्पतालमा स्टाफ नर्सका रुपमा कार्यरत थिइन्। विराटनगरबाट दुहवी तर्फ जाँदै गरेको को१ख ७२३२ नम्बरको यात्रुबहाक बसले दुहवीबाट विराटनगर तर्फ आउँदै गरेको को२७प १०२२ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार बाबु र छोरीलाई ठक्कर दिएको हो